Guryaha Caafimaadka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Adeegyada Caafimaadka Xubinta > Guryaha Caafimaadka
CHPW waxay u adeegtaa dadka qaata adeegyada caafimaadka guriga Washington oo dhan.
CHPW waa Hay'ad u Qalma Caafimaadka Guriga Caafimaadka
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waa mid ka mid ah dhowr Apple Health (Medicaid) oo u qalma Hay'adaha Caafimaadka Guriga ee Caafimaadka (QHHL) ee ay gobolka u xushay barnaamijka Guri Caafimaad.
Adeegyada Guryaha Caafimaadka Apple Health (Medicaid) CHPW ayaa bixisa
Adeegyadayada Guryaha Caafimaadka waxaa bixiya shabakad aasaasan oo sii kordheysa ee ururada isuduwidda daryeelka ee hoos yimaada CHPW. Waxaa loo diyaariyaa xubnaha u qalma Washington oo dhan.
Barnaamijka Caafimaadka Guriga, sida lagu muujiyey Qaybta 2703 ee Sharciga Daryeelka La Awoodi Karo 2010, wuxuu u aasaasayaa “Adeegyada Caafimaadka Guriga” ee loogu talagalay isqorayaasha Apple Health leh xaalado qalafsan iyo baahiyo adeeg sare. Sida lagu qeexay Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicaid (CMS), adeegyada guryaha caafimaadka waxaa ka mid ah lix adeeg oo gaar ah oo ka baxsan daryeelka caafimaad ee caadiga ah:
Maareynta daryeelka dhameystiran
Ku-meelgaarka iyo dabagalka
U gudbinta adeegyada taageerada bulshada
Kor u qaadista caafimaadka
Adeegyada Guriga Caafimaadka waxaa lagu bixin karaa goobaha daryeelka aasaasiga ah iyo iyada oo loo marayo hay'adaha ku saleysan bulshada, iyadoo kuxiran baahida daryeelka gaarka ah ee diiwaangelinta.
CHPW waxay ku bixisaa adeegyo Guri Caafimaad Health gobolo badan Washington oo dhan. Tixraac khariidada caymiska si aad u ogaato haddii aan ku bixinno adeegga degmadaada.
Khariidadda Caymiska Shabakadda Caafimaadka Guriga
Barnaamijku waxaa loogu talagalay dadka qaba Apple Health ama laba caymis ku leh Apple Health iyo Medicare kuwaas oo qaba xaalado dabadheeraad ah. Xaaladahan waxaa ka mid ah neef, kaadi macaan, kansar, iyo niyad jab.
Iskuxidhka ururada iskuduwaha daryeelka waxay bixiyaan adeegyada guriga ee caafimaadka gobolka oo dhan
Ururradeenna isuduwidda daryeelka waxay bixiyaan adeegyo guri caafimaad waxaana ka mid ah Xarumaha Caafimaadka Bulshada iyo ururrada ku saleysan bulshada.
Ururada ku saleysan bulshada waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn Aagga Wakaaladaha Da'da, bixiyeyaasha caafimaadka habdhaqanka ee shabakadda gobolka Behavioral Health ee hab-dhaqanka, iyo Kooxda Adeegyada Isuduwidda Daryeelka Washington.
Guryaha Caafimaadka ee Ku-saleysan Xarunta Caafimaadka ee CHPW
Ururada Isuduwidda Daryeelka
Degmooyinka loo adeegay
Gobollada Guryaha Caafimaadka Loo Adeegsaday
Caafimaadka Bulshada ee Bartamaha Washington Yakima, Kittitas 7
Adeegyada Caafimaadka Beesha Caalamka King 3
Caafimaadka NeighborCare King 3
Sea Mar Xarumaha Caafimaadka Bulshada Clark, Skagit, Whatcom, King, Snohomish 2, 3, 5
Yakima Adeegyada Caafimaadka Xaafada Yakima 7
Guryaha Caafimaadka ee Ku-saleysan Bulshada ee CHPW
Waayeelka & Daryeelka Dadka Waaweyn ee Bartamaha WA Chelan, Douglas, Grant, Okanogan, Adams 6
Gabowga & Daryeelka Mudada-dheer ee Bariga WA Spokane 6
Caafimaadka Habdhaqanka Waqooyi Galbeed Snohomish, Skagit, Whatcom, Island, San Juan, Benton, Franklin, Yakima, Walla Walla, Spokane 2, 6, 7
Adeegyada Caafimaadka Dhimirka ee Columbia Clark 5
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington King 3
King County Dabeecadda Caafimaadka iyo Soo-kabashada King 3
Isku Xirka Nolosha Clark 5
Golaha Gobolka Waqooyi-galbeed Skagit, Whatcom, Jasiiradda, San Juan 2
Waxqabadka Bulshada ee Reer Miyiga Stevens, Ferry, Pend Oreille, Whitman, Lincoln 6
Koonfur-Galbeed Washington ee Gabowga iyo Daryeelka Muddada Dheer Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Kittitas, Yakima, Walla Walla 7
Wakaalada Southwest Washington ee Gabowga iyo Naafada Clark, Klickitat, Skamania, Wahkiakum 5
Adeegyada Qorrax ka soo baxa Inc. Snohomish, Skagit, Whatcom, Jasiirad 2
Waxaad Koraysaa Gabadh! King 3
Tababar iyo taageero ururada iskuduwida daryeelka
Waxaan bixinaa tababar khadka tooska ah iyo caawimaad farsamo si loo daryeelo ururada iskuduwaha ee gobolka oo dhan.
Intaa waxaa sii dheer, Isuduwayaasha Daryeelka ee bixiya adeegyada guriga ee caafimaadka ayaa ah loo baahan yahay in la qaato tababar laba maalmood ah oo ay soo saareen Hay'adda Daryeelka Caafimaadka ee Gobolka Washington (HCA) iyo Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (DSHS). Tababaradaan jaangooyada ah waxaa laga bixiyaa gobolka oo dhan.
Fadlan la soo xiriir [emailka waa la ilaaliyay], si looga wada hadlo baahiyaha tababarka iyo fursadaha.
Tababar ku saabsan daryeelka ku-meelgaarka ah ee ku-meel-gaarka ah iyo dabagal
Cilmi baarista hada socota waxay muujineysaa in kudhowaad 20 boqolkiiba bukaanada Mareykanka dib loo dhigo 30 maalmood gudahood markii laga saaray, cilmi baarayaal badanna waxay aaminsan yihiin in boqolkiiba ay tahay xitaa ka sareysa bukaanka Apple Health. Isuduwidda daryeelka iyo la socoshada kadib isbitaal dhigista ayaa ah adeegyada guriga ee caafimaadka ee muhiimka ah kuwaas oo yareeya kharashyada isla markaana hubiya in si ammaan ah looga baxo cisbitaalka.
CHPW waxay lashaqeysaa Ururka Isbitaalka Gobolka Washington (WSHA) iyo ururo kale si ay u taageeraan hirgalinta Qalabka WSHA si loo yareeyo dib u soo celinta iyada oo loo marayo daryeelka ku-meelgaarka ah ee wax ku oolka ah. WSHA waxay siisaa qalab isbitaalada iyo bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah, qaar badan oo ka mid ah ayaa loo isticmaalaa istaraatiijiyadaha Guryaha Caafimaadka Gobolka Washington.
Su'aalaha ku saabsan Guryaha Caafimaadka
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo gaar u ah barnaamijka Guryaha Caafimaadka ee CHPW, ama aad jeceshahay inaad codsato macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Kooxda Guryaha Caafimaadka ee CHPW [emailka waa la ilaaliyay].
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Ogast 7, 2020